चार पटक ओलम्पिकमा सहभागी बनेका बैकुण्ठ, जो आफ्नै गन्जी र कट्टु पहिरिएर दौडिए | नेपालन्युज
चार पटक ओलम्पिकमा सहभागी बनेका बैकुण्ठ, जो आफ्नै गन्जी र कट्टु पहिरिएर दौडिए
नेपाली धावक बैकुण्ठ मानन्धर यस्ता भाग्यमानी नेपाली खेलाडी हुन्, जसले हालसम्म सबैभन्दा बढी ओलम्पिकमा भाग लिने नेपाली बन्ने अवसर पाएका छन्।
उनले सन् १९७६, १९८०, १९८४ र १९८८ गरी ४ पटक ओलम्पिकमा म्याराथन दौठमा सहभागी भएका थिए। त्यतिबेला नेपालको जनसंख्या १ करोड पनि पुगेको थिएन। उनले आफूलाई ओलम्पिकमा भाग लिन पाएकोमा भाग्यमानी सम्झिन्छन्। उनले आफ्नो हरेक पाइलालाई प्रत्येक नेपालीको पाइला सम्झेर दौडेको बताए।
उनले प्रत्येकपटक कुनै आशिष पाएर सहभागी नभएको भई ट्रायल जितेर खेल्न गएको कुरा स्पष्ट पारे। आफ्नै गञ्जीमा नेपाल लेखेर दौडनु परेको र कट्टुसमेत नभएको परिस्थिति बैकुण्ठले उल्लेख गरे।
ओलम्पिक भनेको खेलकुदको कुम्भ मेला हो। ४० वर्षअघि कस्तो परिस्थिति थियो होला? नेपाली खेलाडीहरुका लागि काठमाडौंबाट उडेदेखि स्वदेश नफर्केसम्म अनगिन्ती चुनौतीको सामना गर्नुपर्थ्यो, तर त्यो सहज पक्कै थिएन।
ओलम्पिकमा दिपक विष्टको त्यो रोमाञ्चकारी भीडन्त
खेलाडीलाई जुत्ताको माला?
सन् १९७६ मा क्यानाडाको मोण्ट्रियलमा आयोजित ओलम्पिकका बेला क्यानाडाको समेत जिम्मेवारी पाएका तत्कालीन नेपालका संयुक्त राष्ट्र संघका प्रतिनिधि शैलेन्द्रकुमार उपाध्यायलाई खेलाडीले आपत परेर गुहार्दा पनि उनले केही सहयोग गर्न नसकेको धावक बैकुण्ठले जानकारी दिए।
सन् १९८० मा मस्कोमा आयोजित ओलम्पिकमा धेरै नेपाली खेलाडीहरुले सहभागिता जनाए पनि खेलकुदलाई तत्कालीन पञ्चायती व्यवस्थासँग जोडेर बदनाम गर्न खोजिएको थियो। नेपाली खेलाडीले बक्सिङ रिङमा पिसाब फेरेकोजस्ता निराधार कुरा फैलाइयो।
कतिसम्म भने ओलम्पिकमा भाग लिएर नेपाली खेलाडीहरु फर्किएपछि नेपालमा जुत्ताको माला लगाएर घुमाइनेजस्ता धम्की दिइएको थियो।
एक्कै पटक ३ जना नेपाली धावक
सन् १९८४ को लसएन्जल्स ओल्पम्पिकमा ३ जना नेपाली म्याराथन धावक दौडेका थिए। बैकुण्ठ मानन्धरले अमिरी यादव र अर्जुन पण्डितसँगै दौडेका थिए। त्यस्तो मौका पछि हालसम्म जुर्न सकेको छैन।
त्यतिबेला उनीहरुलाई म्याराथनको २५ स्थानभित्र परे २५ हजार अमेरिकी डलर पुरस्कार दिने भनि अमेरिकी ओलम्पिक कमिटीले घोषणासमेत गरेको थियो। तर, त्यो सम्भव नभएको बैकुण्ठ बताउँछन्। अहिलेजस्तो वाइल्ड कार्ड पाएपछि मात्र ओलम्पिकमा भाग लिन पाइने स्थिति थिएन। सहभागिता निक्कै कम हुने गर्थ्यो, अहिले बढदै गएको छ। त्यस्तै विधाहरु पनि नयाँ-नयाँ थपिएका छन्।
सन् १९६४ मा गंगाबहादुर थापा भुपेन्द्र सिलवालजस्ता म्याराथन धावक खाली खुट्टा दौडेर स्वदेशको छबि बनाएर आएको भूमिमा नेपालको गौरव बढाउन नेपाली खेल टोली सफल होस्।
अमेरिकामा बस्ने अफर
कुनै पनि ओलम्पिक खेल्न जाँदा त्यहीँ भाग्न हुँदैन भनेर बैकुण्ठ मानन्धरले खेलाडीहरुलाई स्वदेश फर्कन सल्लाह दिन्थे।
लसएन्जल्स ओलम्पिकपछि बैकुण्ठ मानन्धरलगायतका खेलाडीलाई अमेरिकामा बस्न अफर गरिएको थियो। जसका लागि चाँजोपाँजो मिलाइएको थियो। तर उनीहरु बसेनन्। यस कुराको साक्षी एथलेटिक्स प्रशिक्षक पुष्पराज ओझासमेत भएको उनी स्पष्ट पारे।
हामीले जति दुख भोग्यौं, तर अहिले धेरै विकास हुँदा पनि हरेक ओलम्पिकमा नेपालमा विभिन्न घटना हुनु दुःखद पक्ष भएको उनको बुझाइ छ।
सन् २०१२ को लण्डन ओलम्पिकमा नेपाली टोलीलाई प्रयोग गर्न दिइएको वाकिटकी नै फिर्ता नगरेको स्मरण गर्दै बैकुण्ठले विदेशमा जाने खेल टोलीले गरेको ब्यवहारबाट स्वदेशको परिचय बन्ने धारणा ब्यक्त गर्छन्।
महिला एथलेटिक्स प्रशिक्षकलाई नपठाउनु षड्यन्त्र
यसपाली जापान ओलम्पिकममा अहिले एथलेटिक्सको प्रशिक्षक इन्दिरा मल्ललाई जापान जान टिममा समावेसश नगर्नु षड्यन्त्र भएको बैकुण्ठले बताए। प्रशिक्षक मल्ललाई अन्याय भएको स्पष्ट पार्दै उनले मल्ललाई पठाउन नचाहेको विचार प्रकट गरे।
प्रशिक्षक मल्ललाई उनको कोरोनाको बारेको रिपोर्ट यस्तो आयो भनि नदेखाइएको तथा उनी स्वयंले ४ पटक परीक्षण गराउँदा नेगेटिभ आएको बैकुण्ठले बताए। खेलाडीहरुले धेरै सहेर बसेको अब अदालतमा मुद्दा हाल्नुपर्ने बैकुण्ठ बताउँछन। तर प्रशिक्षक मल्लले आफूलाई केही नभनेको उनले बताए।
उनलाई भेटन जाँदासमेत उनले नभेटेको बैकुण्ठले बताए। उनलाई पिर परिरहेको होला त्यसैले आफूसँग नभेटेको होला भनि बैकुण्ठले चित्त बुझाए।
सम्बन्धित खेलका मानिसलाई नै अफिसियलका रुपमा पठाउनुपर्छ। जुडोमा जुडोकै मान्छे, एथेलेटिक्सकमा एथलेटिक्सकै मानिस गए उनीहरुले सहजै नियम बुझ्छन् र विदेशमा काम गर्न सहज हुन्छ। खेलाडीलाई अन्याय नहोस्।
नेपाली धाविकाको प्रदर्शन कस्तो होला?
ढिलो छनौट भएको तथा कोभिड-१९ को कारण यसपाली ओलम्पिकमा १०० मिटर दूरीमा सहभागी जापान पुगेकी सरस्वती चौधरीले खासै तयारी गर्न पाइनन्। तर उनले २२ वर्षअघि देवीमाया पनेरुले राखेको १२.२० सेकेण्डको राष्ट्रिय कीर्तिमान भंग गरे ओलम्पिक जिते बराबर हुने बैकुण्ठ बताउँछन्।
ओलम्पिकमा पुराना खेलाडीहरु लानुपर्ने
सन् २००८ को बेइजिङ ओलम्पिकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल प्रचण्ड स्वयं गएका थिए। तर सन् १९६४ को जापान ओलम्पिकमा भाग लिएका ओलम्पियन भुपेन्द्र सिलवाल, गंगाबहादुर थापा जस्तालाई लगिएन। सन् २०१२ मा भुपेन्द्र सिलवाललाई लण्डन ओलम्पिकमा लगिएको थियो। उनको लणडन ओलम्पिकबाट फर्केर आएपछि निधन भएको थियो। त्यसपछिका ओलम्पिकमा ओलम्पिकमा भाग लिइसकेका ओलम्पियनहरुलाई टिममा पारिएन। खेलकुदमा जीवन विताएकाहरुलाई ओलम्पिकमा जानु भनेको काशी जानुजस्तै हो।
ओलम्पिकमा पदक कहिले आउला?
ओलम्पिकमा पदकको सम्भावना धेरै टाढा छ। एउटा काँस्य पदक पाउन पनि त्यति सजिलो छैन। नेपाली खेलाडीहरुको खेल राम्रो होस्। उनीहरुले आफ्नो कीर्तिमान भंग गर्न सकुन भनि बैकुण्ठ मानन्धरले शुभकामना दिएका छन्।
उनी भन्छन्- नेपाल र नेपालीको गौरव बढाएर आउने काममा सफलता मिलोस्। सन् १९६४ मा गंगाबहादुर थापा भुपेन्द्र सिलवालजस्ता म्याराथन धावक खाली खुट्टा दौडेर स्वदेशको छबि बनाएर आएको भूमिमा नेपालको गौरव बढाउन नेपाली खेल टोली सफल होस्।